နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့မှုကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် နည်းလမ်း (6) ခု – Myanmar Magazine
နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့မှုကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် နည်းလမ်း (6) ခု
November 6, 2018 myanmarmagazine	ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ
သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်း ခြောက်သွေ့ အက်ကွဲခြင်းက ဆွဲဆောင်မှုမရှိ၊ နာကျင်မှုပါ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဖြစ်နေကျ ပြသနာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြစ်များဆုံး လက္ခဏာ တွေထဲမှာ နီမြန်းခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အရေပြားလန်ခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းနဲ့ ကျိန်းစပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အဓိက ဖြစ်ပွားရခြင်း အကြောင်းအရင်း တချို့ထဲမှာ ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ဗီတာမင် ချို့တဲ့ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေဓာတ် ခန်းခြောက်ခြင်း၊ လျှာဖြင့် နှုတ်ခမ်း မကြာခဏ ရက်ခြင်း၊ ရာသီဥတု ကြမ်းတမ်းမှု သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့ခြင်းတို့ အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အကုန်အကျ သက်သာပြီး သဘာဝ နည်းလမ်းများဖြင့် လွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝ ပျားရည်မှာ မယုံနိုင်စရာ အကျိုး ကျေးဇူးတွေ ရှိပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းကို ပျားရည် စစ်စစ်နဲ့ တစ်နေ့ အကြိမ်အနည်းငယ် လိမ်းပေးပါ။ ပျားရည်က ခြောက်သွေ့မှု မရှိအောင် တားဆီးပေးတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူ ထိန်းသိမ်းပေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခြောက်သွေ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းအတွက် ကျိန်းသေပေါက် အကူအညီ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
အုန်းဆီဆိုတာ သဘာဝ အလှဆီ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းဆီကို နှုတ်ခမ်းပေါ် မကြာခဏ ပွတ်လိမ်းပေးပါ။
3) အပြားလိုက် လှီးထားသည့် သခွားသီး
သခွားသီးမှာက ရေဓာတ် ပါဝင်နေပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သခွားသီးက နှုတ်ခမ်း ခြောက်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သခွားသီးရည် သို့မဟုတ် သခွားသီး အပြားကို နှုတ်ခမ်းမှာ လိမ်း သို့မဟုတ် တင်ထားပေးပါ။ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အစိုဓာတ်ကို ပြန်လည် ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
နှုတ်ခမ်းကို သကြားနဲ့ ပျားရည်နဲ့ ပွတ်ပေးပါ။ နှုတ်ခမ်း အရေပြား ဆဲလ်သေများကို ညင်သာစွာ ပွတ်သပ် ဖယ်ရှားပေးပါ။ အဲဒါက နှုတ်ခမ်းကို နူးညံ့ ပျော့ပျောင်း နေစေပါလိမ့်မယ်။
5) နှင်းဆီ ပွင့်ဖတ်
အက်ကွဲနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းကို နူးညံ့ ပျော့ပျောင်းစေဖို့ နှင်းဆီ ပွင့်ဖတ်တွေ အသုံးပြုပါ။ နှင်းဆီ ပွင့်ဖတ်ကို ရေနဲ့ သေချာဆေး ကြောသန့်စင်၊ နွားနို့စိမ်၊ ကြိတ်ခြေပြီး ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ အဲဒီ အရည် ပျစ်ပျစ်လေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ညအိပ်ယာ မဝင်မီ လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
6) ရှားစောင်းလက်ပတ် အဆီပျစ်
ရှားစောင်းလက်ပတ် အဆီပျစ်က ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေ အတွက် အထူး ကောင်းမွန်တယ် ဆိုတာ အထင်အရှား ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုဓာတ် ထိန်းသိမ်း ပေးရုံတင်မက နှုတ်ခမ်း ခြောက်သွေ့ အက်ကွဲလို့ နာကျင်မှုကိုပါ သက်သာ စေပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ် အဆီပျစ်ကို နှုတ်ခမ်းမှာ တိုက်ရိုက် လိမ်းပေးရုံပါပဲ။
← သူမစကားကို တစ်သွေမသိမ်းလိုက်နားထောင်တဲ့ တူလေးကြောင့် အချစ်တွေပိုခဲ့ရတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
အိမ်ဖော်ကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူအား အမှုဖွင့်အရေးယူထား →
တင်းတိပ်ကို ဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲ ?
November 8, 2018 myanmarmagazine Comments Off on တင်းတိပ်ကို ဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲ ?
သိမ်းထားသင့်သောအဖိုးတန် ဆေးမြီးတိုများကို အားလုံးကျန်းမာစေဖို့မျှဝေပါတယ်
December 9, 2018 myanmarmagazine Comments Off on သိမ်းထားသင့်သောအဖိုးတန် ဆေးမြီးတိုများကို အားလုံးကျန်းမာစေဖို့မျှဝေပါတယ်
ငါးရက် အတွင်း ပွေး ညှင်း တင်းတိတ် ဝက်ခြံ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း
December 30, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ငါးရက် အတွင်း ပွေး ညှင်း တင်းတိတ် ဝက်ခြံ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း